Edere site Tranquillus | August 30, 2020 | Iji dozie ma rụọ ọrụ na France
Ndị ọrụ niile na ndị na-achọ ọrụ karịrị 16 nwere ike irite uru na akaụntụ ọzụzụ onwe onye site na mbido ọrụ ọrụ ha ruo oge ezumike nka. Enwere ike iji ikike ndị a niile na ndụ ọkachamara. Yabụ, iji nwee ike ịgbaso ọzụzụ akwadoro, onye na-achọ ọrụ nwere ike ịnakọta CPF ya. Chọpụta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngwa ọrụ a maka ịchekwa ụzọ ọrụ.
Kedu ihe gbasara ọzụzụ onwe onye na gịnị ka eji ya?
CPF ma ọ bụ karịa ihe ndekọ ọzụzụ onwe onye bụ ụzọ na-enye gị ohere ịzụlite na ịzụrụ nkà gị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ihe ndekọ nke ọzụzụ onwe onye na-enye onye ọ bụla nọ ọrụ ohere inweta ikike ọzụzụ.
Ndozigharị nke ọzụzụ ọrụ aka na-achọ iji nweta ụzọ ndị ọkachamara iji gbochie na ịlụ ọgụ na enweghị ọrụ. Ọ gụnyere mgbanwe dịgasị iche iche, gụnyere akaụntụ ọzụzụ onwe onye. Site na 2019, a na - enweta ego maka ọzụzụ ọzụzụ nke onwe gị, na-akwụ ụgwọ na euro (ọ bụghịzi na awa), n'ihi:
500 euro kwa afọ maka ndị ọrụ oge na ndị ọrụ oge niile, kwadoro na euro 5.
800 euro kwa afọ maka ndị ọrụ nwere obere ọrụ, gụnyere na 8 euro.
CPF: mmejuputa atumatu nke na-eme ka inweta ozụzụ
Ime ngosipụta nke mbụ na ọkara nke abụọ nke 2019, ngwa mkpanaka na-enye gị ohere ịzụta ọzụzụ ọzụzụ gị kpamkpam na enweghị enyemaka nke ndị ọzọ. Ndị Caisse des Dépôts na-elekọta ọrụ a. Ọ ga - enyere gị aka ịmata ikike gị ma jikwaa faịlụ gị na ikike zuru oke ọbụlagodi na onyinye ntinye kwekọrọ.
Site na ngwa ahụ, ị ​​ga - enwe ike:
Mara ikike gi;
Chọta usoro ọzụzụ metụtara ụlọ ọrụ gị;
Nwee ike ịdebanye aha n'enweghị onye na-elekọta ya ma kwụọ ụgwọ n'ịntanetị;
Lelee mwebata n'ime ọrụ ọrụ na ngwụsị nke ọzụzụ ahụ;
Lelee ma dee echiche na oge ọzụzụ ọ bụla.
Isnye nwere nchegbu?
Ndị ọrụ niile gbara afọ 16 na karịa, n'agbanyeghị ọkwa ha (ndị ọrụ ụlọ ọrụ nzuzo, ndị na-achọ ọrụ, ndị ọrụ ọha na eze ma ọ bụ nke onwe ha na ndị lara ezumike nka). A na - enweta ikike nke akụkọ ndị a ma nwee ike iji ya na ndụ gị iji zụọ gị, ọbụlagodi na mgbanwe nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọrụ ọrụ.
Kedu ihe CPF nwere ike ị nweta ego?
CPF gị nwere ike inyere gị aka itinye ego:
Ọzụzụ ọkachamara gị;
Ikike ụgbọ ala ikike ịnya ụgbọ ala;
Nkwado maka ịmepụta azụmahịa;
Inweta asambodo ma obu ikike.
Gini mere i ji agha
Oge ịchọ ọrụ nwere ike ịbụ ohere iji tụgharịa uche na ọrụ gị, nka gị, ike gị. Nke a bụkwa ohere iji melite CV gị iji dọta uche ndị na-ewe ndị ọrụ.
Ikwu okwu n'asusu bekee bu nka nke ndi ulo oru choro. N'ezie, ijikọ ahia nke ụwa na-emetụta mpaghara niile na ọnọdụ niile, n'agbanyeghị ọkwa ọrụ ya. Imeziwanye nka bekee gi nwere ike buru ezigbo ngo maka ochicho oru gi.
Companieslọ ọrụ na ụlọ ọrụ 14 gburugburu ụwa tụkwasịrị ule TOEIC. Ha họọrọ ule ndị a maka ntụkwasị obi ha na iji atụnyere ọkwa Bekee iji kwado mkpebi mbanye na mkpebi ha. Yabụ, ịnwere ike iji CPF gị kwụọ ụgwọ iji nwalee TOEIC.
CP nwere CPF dị iche iche?
Azịza ya bụ ee. N'ime oge ọrụ gị, ị ga - amata ụdị CPF dị iche iche 3 bụ:
Onwe onye kwadoro CPF naanị nke onye ọ metụtara (iji ya rụọ ọrụ na mpụga oge ọrụ). Nchikota ndi mmadu nwere onwe ha ma nye ha ohere ịhọrọ ezigbo ọzụzụ site na katalọgụ enyere aka na saịtị ahụ. Na ngwa mkpanaka, enweghị nnabata ọ bụla na enweghị usoro nhazi ọzọ ga-adị mkpa.
CPF wuru. Nke a bụ ụzọ ekesara n'etiti onye were gị n'ọrụ na onye ọrụ ya (nke a ga-eji na mpụga oge ọrụ ma ọ bụ n'oge ọrụ). Ebumnuche bụ iwulite ọnụ, onye were gị n'ọrụ na onye were ya n'ọrụ, ọzụzụ ọrụ gbasara ọdịmma mmadụ niile. Nke a chọrọ nkwekọrịta n'etiti ndị ọzọ yana mkpokọta nke akaụntụ CPF onye ọrụ.
Mgbanwe CPF nke dochiri Ntinye Ọzụzụ Otu Onye (CIF). Nke a bụ ezumike ọzụzụ iji rụọ ọrụ na nka ya yana enweghị ikike n'ọrụ.
Ndị na-achọ ọrụ na CPF: Kedu ihe bụ ikike gị?
Ma ị debanyere aha na Pôle Emploi ma ọ bụ na edeghị aha gị, ị nwere ikike imeghe akaụntụ CPF na saịtị moncompteformation.gouv.fr. I nwekwara ike ime nke a site na ngwa mkpanaka, dị naApp Store et Google Play.
Ọzụzụ dịnụ nwere ike inye gị ohere inweta iru eru / asambodo na ịnweta ọtụtụ ihe ọmụma na nka.
N'adịghị ka onye ọrụ, dịka onye na-achọ ọrụ, ịnweghị ike ịnweta ikike ndị ọzọ n'oge oge enweghị ọrụ. Agbanyeghị, nke a apụtaghị na ịnweghị ike iji ikike gị nwetara ruo mgbe ahụ.
Etu esi akwụ ụgwọ ọzụzụ gị site na iji ego CPF?
Can nwere ike ịchịkọta ikike gị CPF ma bido ọzụzụ n’oge oge ị na-enweghị ọrụ. E nwere ụzọ abụọ:
Ọ bụrụ na ikike gị enwetara na ọzụzụ niile gị, a na-akwado ọrụ gị nke ọma. Gaghị achọ nkwekọrịta Pôle Emploi iji bido ọzụzụ gị.
Ọ bụrụ na ikike ị nwetara anaghị ekpuchi ọzụzụ gị niile, Pôle Emploi ga-emerịrị usoro ọzụzụ gị. Onye na - enye ndụmọdụ gị dị na Pôle Emploi ga - ahụ maka ịhazi “faịlụ ọzụzụ” ma chọọ ego ọzọ n’aka Pôle Emploi. Na mgbakwunye, Kansụl mpaghara ma ọ bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwekwara ike inyere gị aka na usoro a.
N'agbanyeghị ọnọdụ gị, dị ka onye na-achọ ọrụ, ị ga-akpọtụrụ Pôle Emploi ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara CPF gị.
Ozi banyere onwe gị: ihe niile ịchọrọ ịma September 26th, 2020Tranquillus
gara agaMụta ilere akara nke akwụkwụ gị n'usoro
-esonụAhapụ maka mmalite azụmahịa, ndebiri akwụkwọ ozi ngwa ngwa
Ihe gbasara ịkwọ ụgbọala na ịkwọ ụgbọala na France
Ụgbọ njem na France
Gịnị mere ị ga-eji dozie ma rụọ ọrụ na France?